Uhlelo lwe-EcoFellowship - Isikhungo se-EcoTechnology
Uhlelo lwe-EcoFellowshipIsikhungo se-EcoTechnology2021-09-01T14:10:35-04:00
Ngiyabonga Kubasekeli Bethu
“I-EcoFellowship yithuba elilodwa kanye nethuba lokuphila elikunikeza isibopho somsebenzi wesikhathi esigcwele kanye nenkululeko yokuhlola izintshisekelo zakho zomsebenzi. Kwakuyiphuzu elimangazayo lokweqa umsebenzi wami futhi langinikeza ukufinyelela kuyo yonke inethiwekhi yabantu abangisizile endleleni. Ngempela ngabe angikho lapho ngikhona namhlanje ngaphandle kohlelo lwe-EcoFellowship! ”
UBrian Premo, EcoFellow '20
“Amathuba okuthuthuka kobungcweti kanye nokuholwa emkhakheni wezemisebenzi kwehlukanisa i-EcoFellowship kunoma yimuphi umsebenzi ojwayelekile, njengoba nezinga lomsebenzi i-EcoFellows elithenjwe ngalo elihlukanisa nalo ne-internship ejwayelekile. Ukuba yi-EcoFellow kusho ukuba nohlelo lokusekela lwabasebenzi bakwa-CET abakuzungezile abazimisele ukukusiza ube ngumholi emkhakheni wezemvelo. ”
UMat Brodeur , EcoFellow '17
“Ukuphuma ngqo ekolishi, ngicabanga ukuthi akujwayelekile ukuthola umsebenzi lapho ubandakanyeka khona ezinhlakalweni ezahlukahlukene kangaka zomsebenzi, nalapho izinhloso zakho nezintshisekelo zakho kunakwe kakhulu khona. I-EcoFellowship inguquko enhle phakathi kwekolishi nomsebenzi, futhi sinikezwa inhlanganisela ephelele yokuholwa kanye nobunikazi bomsebenzi ngamunye esiwenzayo. Wonke umuntu e-CET unendaba ngempela nokukhula kwethu njengabagcini bezemvelo kanye nabantu. ”
U-Becky Kalish, EcoFellow '19
“Le Fsociation ibigcwele okuhlangenwe nakho okuvuzayo, kusuka ezinsukwini zokuthuthuka kobungcweti kuya ezethulweni, kusuka ekuhlekweni nabasebenza nabo kuya ezinsukwini zomhlangano. Njenge-EcoFellows, besiqhubeka nokuthola amakhono amasha, sichayeka emathubeni okuxhumana nabantu, futhi samukelwa ngabantu esisebenza nabo. ”
UCoryanne Mansell , EcoFellow '16
“I-Fellowship yithuba elimangalisayo lokufunda kabanzi mayelana namandla kagesi, ukuncishiswa kukadoti, neminye imisebenzi ehlobene nokusimama ngenkathi ucija amakhono nobungcweti. I-Fellowship ihlukile ngoba inikeza ibhalansi enkulu phakathi kokusebenza isikhathi esigcwele ngokuzimela, nokuthola ukuqonda okwengeziwe, nokungivumela ukuthi ngihlole engikuthandayo emkhakheni wezemvelo. Konke lokhu besisebenza nabasebenza nabo abangisekelayo nabanozwelo! ”
“Le Fsociation ingibekelele izinga lokuthi kumele zisebenze kanjani izindawo zokusebenza; wonke umuntu unomusa, uyasiza, uyaxhasa, futhi akahluleli, kanti ngesikhathi esifanayo ukhiqiza umsebenzi ngendlela efanelekile nangobungcweti. Ukwethenjwa ngomthwalo omningi kangaka emsebenzini wezinga lokungenela akuvamile, ngakho-ke ukuba nalelo lungelo ku-CET kungisizile ngakhula ngokwami ​​nangokomsebenzi. ”
U-Olivia Horwitz, EcoFellow '19
“I-EcoFellowship iyithuba eliyingqayizivele uma kuqhathaniswa neminye imisebenzi noma ama-internship ngoba sinikezwa umthwalo omkhulu wemfanelo futhi silindelwe kakhulu, kanti futhi sinikezwa ukuholwa nokuxhaswa ngenkathi sifunda amakhono amasha. Ngizizwa nginenhlanhla enkulu ngokuba yingxenye yohlelo olumangalisa kangaka! ”
UChiara Favaloro, EcoFellow '17
“Ngempela angikwazanga ukucela igxathu lokuqala elingcono emsebenzini wami ngiphume ekolishi. I-CET inginike umthwalo olinganiselayo wokuzibophezela kanye nomthelela kanye nokuqeqeshwa nokuqeqeshwa. ”
UWinn Costantini , EcoFellow '17
“Ngiyibonga kakhulu iCET futhi ngibe nesipiliyoni se-EcoFellowship. Kube wusizo olukhulu ukuqonda okuqinile kwezokuxhumana nokwakhiwa kwemidwebo endimeni yami yamanje. Ngiyayithanda nokuthi isondele kangakanani iqoqo lami le-EcoFellow! Sonke abahlanu sibamba njalo ezinyangeni ezimbalwa futhi kube wusizo, manje naphakathi nokuhlangana kwethu, ukuba neqembu lontanga abasekelanayo hhayi kuphela ezimpilweni zethu kepha futhi ngenkathi sandisa imisebenzi yethu futhi sithatha izinyathelo ezilandelayo izimpilo zethu. ”
U-Aliza Heeren, EcoFellow '17
“Ngokungafani nezikhundla zendabuko ezingeni lokungena, ngithola ithuba lokusebenza kumaphrojekthi anomthelela eduze kakhulu futhi ngokuningiliziwe. Indawo evulelekile nekhuthazayo e-CET ingivumele ukuthi ngiqonde ukubaluleka komphakathi obambisanayo futhi onenethiwekhi. ”
UMorgan Laner, EcoFellow '19
“Le Fsociation inamathuba amaningi angivumele ukuthi ngithole ukuthi ngifuna ukwenzani ngemfundo yami nangekhono elizayo. Okukhulu kunakho konke ngokubambisana ukuthi kunjani unyaka. Uma ngithatha isinqumo sokuqhubekisela phambili umsebenzi wami kwezemvelo, anginalo ulwazi lobuchwepheshe kuphela, kepha ngithole amakhono amasha futhi ngakhulisa kakhulu ukukhula kwami ​​kwezobuchwepheshe. Lonke ulwazi lokuba yi-EcoFellow luhlukile, luyakhanga, futhi ngaphezu kwakho konke luyamangalisa! ”
UJonathan Ruiz, EcoFellow '19
“Le EcoFellowship ingivumele ukuthi ngizakhele okwami ​​ulwazi futhi ngiyivumelanise ngqo nezintshisekelo zami. I-CET inendaba ngempela nokuthi yini esiyithandayo futhi isisiza ukufeza lezo zinhloso. ”
UNatasha Nurjadin, EcoFellow '19
"Lolu hlelo olukhokhelwayo, lwezinyanga eziyishumi luyindlela enhle yokuthola amakhono abalulekile kanye nesipiliyoni esihlobene nokusebenza kahle kwamandla, ukonga izinsiza, nokusimama, kanye nokuholwa ekuhleleni umsebenzi nasekuthuthukiseni umsebenzi."
UBrittney Topel, EcoFellow '16
“Isikhundla se-EcoFellowship inguquko enkulu phakathi kwekolishi nomsebenzi ngiqhubeka ngifunda futhi ngikhula usuku nosuku. Abasebenzi bakwa-CET banobungane, bayasiza, futhi basebenza kanzima, futhi ngiwuthokozela ngempela umsebenzi wami e-CET. Ngibonga ngendlela emangalisayo ngesipiliyoni sokwenza umthelela olinganisekayo emphakathini ongizungezile… ”
Avery Isiphambano, EcoFellow '18
"Ngijoyine i-EcoFellowship ukuze ngithole amathuba emisebenzi emisha ukuze ngikwazi ukusimama futhi ngithole amakhono engiwadingayo ukuze ngiqhubekele phambili… Uma ukuba umholi wezemvelo esikhathini esizayo kuyinjongo yakho, i-EcoFellowship iyitshe elikhulu lokunyathela umsebenzi wakho!"
UWillow Cohn, EcoFellow '18
Mayelana nenqubo kanye nenqubo yokufaka isicelo
Ku-CET senza okuluhlaza kube nengqondo. Njenge-EcoFellow, usisiza ukudala umthelela olinganisekayo. I-EcoFellows isebenza ngokuhleleka, igxile kakhulu ekufinyeleleni emphakathini nasekuzibandakanyeni, ukuxhumana, kanye nesitolo sethu sezinto ezibuyisiwe ze-EcoBuilding Bargains. I-EcoFellowship iyi- kude position, ngomuntu osebenza ngokuzithandela ngokuya ngemikhombandlela ye-CDC.
Inqubo yohlelo lokusebenza:
Siqala ukwamukela izicelo ngoJanuwari. Izicelo zamukelwa ngqo ngokusebenzisa i- ikhasi lemisebenzi.
Abafakizicelo bahambisa incwadi eyisembozo, i-resume, nesampula yokubhala yamagama angama- ~ 200.
Abakhethiweyo abakhethiwe banengxoxo emfushane yolwazi kanye nokubuka konke, okulandelwa yingxoxo nekomidi eliqashayo.
Ukuqondiswa kwamasonto amabili
Amathuba ezinyanga zonke okuthuthuka kochwepheshe
Ithuba lokuhambela izingqungquthela
Ukuthuthukiswa kwamanethiwekhi nokukhula komsebenzi
Umholo nezinzuzo ze-EcoFellowship:
I-EcoFellowship ikhokha u- $ 15 ngehora ngamahora angama-40 ngesonto (isikhathi sohlelo), ibhonasi eyengeziwe engu- $ 2,000 lapho kuqedwa uhlelo. Izinzuzo zifaka phakathi: umshuwalense wezempilo; ukhokhelwe ngokugula, amaholide kanye neholide; 403 (b); izimpahla kanye nokubuyiselwa kwemali ye-mileage, kanye nohlelo lokubuyiselwa kwemali yeselula.
Izicelo zohlelo lwe-2021-2022 EcoFellowship manje sezivaliwe
Uhlelo lwe-EcoFellowship Program luyisikhundla esikhokhelwayo sezinyanga eziyi-11 sokusebenza nabasebenzi be-CET namanye ama-EcoFellows ukwenza imisebenzi ehlukahlukene ephathelene nezinhlelo zokwenza isimo sezulu kanye nohlelo lwezemfundo.
I-EcoFellows isekela imizamo ye-CET yokusiza abahlali, izitshudeni, izikhungo kanye namabhizinisi esifundeni sonke ezinhlelweni eziqhubekayo ekusebenziseni amandla kagesi, izinsizakalo zamandla asekhaya, amandla avuselelekayo, kanye nokwehliswa kwemfucuza ngokusebenzisa kabusha, ukusebenzisa kabusha nokwenza umquba.
I-EcoFellowship iyi- kude isikhundla, nethuba lomsebenzi wokuzikhethela ngaphakathi komuntu ngokuya ngemikhombandlela yokuphepha.
I-EcoFellows isebenza ezweni lonke ngezikhundla ezahlukahlukene. Lapha kulapho kuphela abambalwa abagcine khona.
UJared Shein '21
UMolly Craft '20
UBelén Rodríguez '20
UBrian Premo '20
UMaeghan Klinker '20
UJonathan Ruiz '19
UNatasha Nurjadin '19
UMorgan Laner '19
UShelby Kuenzli '18
UWinn Costantini '17
UChiara Favaloro '17
UDiana Vasquez '16
UKelsey Colpitts '16
UClaire Gerner '16
UJenny Goldberg '15
UNathan Shuler '15
USara Hebert '14
UHeather Merhi-Mathews '14
UKatelyn Tsukada '13
Siyabonga Kubasekeli Bethu Abaphanayo: